Fanatsarana ny karoka amin'ny karama: Ohatra iray amin'ny dia sy fizahan-tany | Martech Zone
Fanatsarana ny karoka amin'ny karama: Ohatra iray amin'ny dia sy fizahan-tany
Zoma, Aogositra 28, 2015 Douglas Karr
Raha mitady fanampiana ianao na manam-pahaizana amin'ny fikarohana karama, loharano lehibe iray any PPC Hero, famoahana lehibe iray izay izaran'ny Fikarohana Marketing ny fahaizany. Vao haingana i Search no namoaka an'ity infographic mahafinaritra ity, ny Torohevitra PPC folo voalohany ho an'ny mpivarotra fizahan-tany sy fizahan-tany. Na dia fitsangatsanganana sy fizahan-tany aza ny tranga fampiasana, ireo torohevitra ireo dia mety amin'ny fikatsahana marketing rehetra hampidirina fomba fikarohana fitadiavana karama amin'ny tetikadiny PPC (Pay Per Click).
Miaraka amin'ny 65% ​​amin'ireo mpandeha fialan-tsasatra ary 69% amin'ireo mpandeha raharaham-barotra no milaza fa mitodika any amin'ny tranonkala izy ireo hanapa-kevitra amin'ny fomba na aiza no tian'izy ireo haleha, dia nihevitra i Cari Marketing fa ny infographic tsara tarehy misy torohevitra azo ampiharina dia ho loharano sy torolàlana lehibe ho an'ny dia sy fizahantany rehetra. mpivarotra.
Ireto ny toro-hevitra ambony Optimised Paid Search Optimization omena
Manavaka ny tenanao - Manaova fikarohana momba ny anao fampielezan-kevitra PPC mpifaninana ary avahao ny fanentanana doka nataonao.
Fanentanana miovaova - Toerana aiza no mety tadiavin'ny mpihaino anao? Manomeza fampielezan-kevitra marobe mba hizaha toetra sy hanovaova ny tolotrao.
Geo-Target - Lazao ny toerana misy an'ireo faritra azo ampiharina, raha tsy izany dia mandany ny teti-bolan'ny varotra fikarohana ianao.
Kendrena amin'ny andro sy ny ora - Ny fahazoana antoka fa hita ny fanoloran-tenanao raha toa ny prospect no mijery azy ireo dia mety hanana fiakaran'ny vidin'ny click-to-conversion.
Manatsara ny ROI - Mety tsara ny mahazo fifamoivoizana be nefa tsy mandoa ny faktiora. Fakafakao sy mifantoha amin'ireo fanentanana izay mitarika fidiram-bola fa tsy fifamoivoizana fotsiny.
Paikady momba ny tolotra - Mamorona paikady fanaovana tolotra mifototra amin'ny tanjon'ny fampielezan-kevitrao. Ny fanentanana, fizarana, fifamoivoizana ary fiovam-po no zava-dehibe rehetra, fa ny fandaniana bebe kokoa ho an'ny fanovana dia misy dikany bebe kokoa noho ny mividy fifamoivoizana amin'ny tolo-bidy tena avo be.
Manatsara ny fanentanana amin'ny fampisehoana - Araho maso ny fametrahana dokambarotra ary manatsara ny viewport fa tsy ny fampiasana ny habe iray dia mifanaraka amin'ny paikady rehetra.
remarketing - Ny paikadin'ny PPC rehetra dia tsy maintsy misy paikady fanamarihana dokambarotra! Ireo mpitsidika kendrena efa teo amin'ny tranokalanao sy ankavia dia hanaiky tanteraka mampitombo ny tahan'ny fiovam-po.
Mampiasà Bing - 69% amin'ireo mpandeha raharaham-barotra no mitodika any amin'ny Internet mba hikarakara ny fivezivezena ary 71% ny fifamoivoizana amin'ny Bing dia an'i Bing (tsy ao amin'ny Google).
Manatsara ny pejy fitobiana - Ny pejy fitobiana tsara dia tsy mampiakatra fiovam-po fotsiny, fa kosa miteraka isa tsara kalitao izay manatsara ny fametrahana ny doka. Manatsara ny pejy fitobiana!
Tags: marketing hanapinfikarohana karamavarotra fikarohana karamamandoa isaky ny kitihopayperclickppcppc marketingppcherodinika |fizahan-tanyTravel